संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावमा के छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
काठमाडौं, चैत ३० । सरकारले यसअघि संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई ११ बुँदे नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
प्रदेश संख्या र सीमांकन परिवर्तन गर्न शक्तिशाली राजनीतिक आयोग गठन गर्ने, संघीय संसदले प्रदेशको सहमति नभए पनि प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्न सक्ने, स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभामा मत दिन पाउने अधिकार कटौती र भ्रातृभाषालाई अनूसूचीमा राख्ने सहितका नयाँ बुँदा राख्दै संसद सचिवालयमा मंगलबार संशोधन दर्ता गराएको हो ।
याे पनि पढ्नुस एमालेसँग यसकारण विच्कियो मधेसी मोर्चा, एमालेलाई सप्तरीमा कार्यक्रम गर्न रोक
ट्याग्स: madhesi morcha, sambidhan sambodhan